2021-10-22 @ 20:45 in Kolontsaina
Hagagàna ny ahy raha nahita ireto mpanao gazety tezitezitra androany tao amin'ny tambajotran-tserasera tao. Hay misy ity tenimita avy amin'ny minisitry ny serasera ity mametraka fa tsy maintsy maka alalana any aminy raha hanao sarimihetsika na hanao fanadihadiana (reportage). Voasembatsembana tanteraka ny asan'ny mpanao gazety. Ny sarimihetsika ihany koa tsy mahazo manao dika na fijery mampihomehy amin'izay ataon'ny politisiana raha ny fandinihana azy. Na dia ny "documentaire" aza moa dia tsy maintsy akana alalana.
Iza no namolavola ny lalàna ary iza no nandany azy? Inona no tanjona amin'ny fametrahana lalàna tahaka itony? Angamba efa hoavy tsy ho ela ny fangatahana alalana rehefa hamoaka vaovao. Mariho tsara ireo fotoana ireo fa tsy nisy tamin'ny fotoana nitondran'ny mpanao didy jadona Ravalomanana Marc na dia ny iray aza.
[Fanampiny] Ilay lahatsoratra teo aloha no nantenaina hisy fanitsiana, kanjo ity iray ity no nivoaka, ampitson'ny nanehoana ny taratasy voalohany imasom-bahoaka.
Ny tsikaritra dia tsy avy amin'ny minisitra ny sonia na dia nolazaina ho amin'ny anaran'ny minisitera aza.
2021-10-19 @ 23:29 in Ankapobeny
Efa nosoratako any amin'ny tambajotran-tserasera any fa am-bolana aho izao no tsy manaraka vaovao mijery fahitalavitra. Rehefa dinihina dia ahitana vaovao haingana ny media sosialy na mety hisy fitongilanana sy tsy feno aza. Etsy ankilany dia toy ny zava-mahadomelina ihany koa io rehefa ijanonana ela loatra ao aminy ao, satria sarotra ny ivoahana avy ao rehefa mahatsikaritra fa lava ny fotoana nolaniana tao.
Ny nanaitra izao dia ny filazana fifampidinihana teo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitantana ny CFFA izay ekipa vao haingana saingy efa nisolotena an'i Madagasikara sahady eo amin'ny sehatra baolina fandaka afrikana. Iray amin'ny nampalaza azy ny nandraisany ny lokon'ny antokon'ny mpitondra. Niadian-kevitra teo amin'ny tontolon'ny mpankafy io ny amin'ny tsy tokony hampidirana politika ny fanatanjahantena.
Rehefa resin'ny Interclube avy ao Angola tamin'ny isa 0 sy 3 tao Mahamasina ny CFFA dia nanambara ny 19 oktobra 2021 fa hanambara ny ekipany ho "forfait" amin'ny lalao miverina. Nilaza kosa ny mpitondra fanjakana fa hanamboarana kianja manara-penitra ao Atsimondrano ny vola saika hampiondranana ity ekipa ity. Tezitra avy hatrany ny maro tamin'ireo nahazo ny vaovao hoe ahoana ity resy tsy miady ity, io ekipa io ve ilay nolazaina fa asolo ny Barea? Toe-tsain'ny mpanao fanatanjahantena ve izany? Efa nisy ny lalao nanan-tantara teo amin'ny baolina fandaka fa mbola afaka miady tsara amin'izany isa izany na dia hoe resy an-trano aza.
Iray amin'ny nahatonga ny resabe manko, ary izay no mety ho nandraisany ny lokon'ny mpitondra fanjakana, fa tokony ho roa ny solontena malagasy (tompondaka sy fiadana ny amboara) fa tonga dia tsy nandray anjara ny ADEMA satria tsy manambola ho enti-miatrika izany lalao iraisampirenena izany. Ity ekipan'i CFFA ity kosa indray nahazo fanohanana avy amin'ny mpitondra fanjakana fa... "mbola latsaka be ny haavom-pahaizan'ny ekipa" ka aleo milamina tsy manafika any Angola intsony. Be no mihevitra fa potika hatrany izay lalovan'ny politika ary tsy afa-miala amin'izany ny CFFA. Lesona ity sy ho fampahatsiahivana fa nisy izany toe-javatra izany.
Ny zavamisy dia mbola tsy afaka mihitsy ny baolina fandaka eto Madagasikara (tsy miresaka Barea aho eto) noho ny tsi-fetezan'ny rafitra fampidiram-bola ao aminy ka mampiankina azy amin'ny politika toy izao mitranga izao. Tsy mametraka mangarahara ny fivarotana tapakila sy ny vola azy avy amin'izany ary manjaka amin'ny sehatra iva loatra ny vola. Tsy tafiditra anaty rafitra ny baolim-pokontany izay mahazo olona sady maimaim-poana ny fijerena izany lalao izany. Fomba fitantanana tsy ho lasa lavitra mihitsy izany. Raha te-hampandroso ity taranjan'ny baolina fandaka ity dia tsy maintsy mijery ny rafitra fampidiram-bolan'ny ekipa sy ny ligy mbamin'ny federasiona mihitsy hahazaka tena fa raha mbola tsy mihevitra izany dia aza manantena vokatra tsara na hikarakara taniketsa sy katita aza.
1 2 3 ... 162 163 164 Manaraka»